Siigadu wax ma u dhintaa raganimada? | Raganimo University
Siigadu wax ma u dhintaa raganimada?
February 18, 2019~1 minute
In raggu ay siigaystaan ma ahan sir qarsoon. Ninkasta gacmahiisa mar ayuu ku biyo-baxay. Balse su'aashu waxay tahay siigadu wax ma u dhintaa caafimaadka raganimada? Mise faa'iido ayay u leedahay ragganimada?
Dhaqaatiirtu waxay sheegeen in siigadu ay u fiicantahay raganimada, maadaama raggu ay ku bartaan sida loo galmoodo iyo biyo-baxa. Waxay kale oo ku bartaan kontoroolka biyo-baxa. Balse dhaqaatiirku waxay sheegeen in ragga aadka u badsada siigada oo waqti badan ku dhumiya in ay qatar ugu jiraan in ay balwad u noqoto, taasoo dhibaato u geeni karta caafimaadka galmada iyo guud ahaan qaab nololeedkooda.
Ragga qaar ayaa marka ay siigaysanayaan waxay ku daraan daawashada filimaanta qaawan, iyadoo dhaqaatiirtu ay sheegeen in filimaantaan ay wax u dhimaan raganimada. Qaasatan ragga qaar ayaa marka ay filimaantaan daawadaan fikrado qaldan ka aamina galmada. Iyadoo la sheego in markii ay u galmoodaan dumarka ay ku qaldaan wixii ay filimaanta ku soo arkeen.
Sidoo kale dhaqaatiirtu waxay sheegeen in biyo-baxa galmada dumarka ay leedahay faa'idooyin caafimaad balse marka uu ninku ku biyo-baxo siigada uusan ka heleyn faa'iido caafimaad oo la mid ah taasi.